Bhasikoro rack → mhando uye zvakanakira • Guta Fomu Diki Architecture
Mabhasikoro anofanirwa kuchengetwa mumamiriro ezvinhu akakodzera, saka rack yakakodzera ichave inoshanda. Icho chigadzirwa chakakura zvekuti munhu wese achachiwana bhasikoro rack zvakakwana pachavo, izvo zvingave zvakasiyana zvachose nezvimire kunooneka pese nhanho munzvimbo yeruzhinji.
Kutenderera bhasiketi ndechimwe chezvakakurumbira zviitiko
Mabhasiketi ma racks anobatsira kuchengetedza ako maviri-mawiricheya, pamwe nekuzvitakura kana zvichizviratidza mota bike rack.
Marudzi ese emasimendi akakosha saka nhasi nzvimbo yemadhorobhauyewo kumapurazi akazvimirira. Kunyanya kuti muPoland mune vanhu vazhinji uye vanoda vhiri maviri, avo vasingangoisa mari yavo mumabhasiketi, asiwo nechido kushandisa zvinowedzera zviri nani zvemaguta.
Izvo hazvigone kukanganwika kuti munzvimbo yemaguta ePolish kune nzvimbo dzakawanda kwaunogona kubhadhara bhasikoro pamutengo unoratidzika. Nekuda kweizvi, haufanirwe kunetseka nezve kuwanikwa kwemidziyo.
Kana ari emabhasiketi akazvimirira, kuchengetwa kwemidziyo iri dambudziko kune vakawanda. Haasi munhu wese anogona kukwanisa bhasiketi raki yegaraji, nekuti hapana chingawedzerwa sero. Nekudaro, vagari vemuvharwa emafuru, kunyange izvi zvisingawanzo, havafanire kuve neyepadera bhasikoro kamuri kana kunyange yepasi. Ipapo bhasikoro rinowanzo kusara pamberi peimba kana mukati. Iyo yakapetwa bhasiketi rack yeimba kana furati inozove isingakoshe.
Ndeipi bhasiketi rack yekusarudza?
Izvo zviyero zvebhasiketi rack dzakasiyana kwazvo. Kana iri nzvimbo yedhorobha, kazhinji yakakura masiduru, semuenzaniso 3-bhasiketi rack, zviri nani kuita 4-bike rack kana kunyange yakakura.
Yakakura yakadaro racks haidiwe mufurati kana imba, ipapo rack yemabhisiketi maviri kazhinji ichave yakakwana. Chinhu chinonyanya kukosha ndechekuti chigadzirwa chimwe nechimwe cherudzi urwu chinobvumira kuchengetedzwa kwakanaka kwebhasikoro kubva mukukuvara, uye panguva imwechete, kana, semuenzaniso, chiri chinomira mukati, inochengetedza fenicha uye zvimwe zvigadzirwa zviri mufurati kuparara.
Kuparadzanisa kwekutanga kunoshanda kune ekunze nekumukati kumira. Mhando mbiri idzi dzinosiyana mushe pazvinhu zvese kubva mukuvakwa uye zvigadzirwa zvinoshandiswa, kune nzira yakaunganidzwa bhasikoro.
Kunze bhasiketi rack
Mune yekutanga nzvimbo, iwe unofanirwa kufunga nezvekumira kwekunze iyo iri munzvimbo yemadhorobha, zvakare, ivo vanogona kuiswa pamberi peimba, yakanamatira pasi nekushandiswa kwezvikorekedzo zvakasakosha kana screws, iyo ichave nechokwadi chakasimba chekusimbiswa kwezvibodzwa.
Ehezve, zvakawanda zvinoenderana nepasi panomiswa bhasikoro raki. Iko hakuna dambudziko nekuzvigadzirisa pasi, asi zvakanyanya kuoma kana iko kuiswa kunoitwa pakumisa matombo, ibwe kana rimwe rakaoma nzvimbo.
Kunze kwakamira ivo pachavo kunogona kukamurwa kuita mhando mbiri:
raip rack yemabhasikoro - Aya masisito akareruka ayo chimiro chakafanana neakafisirwa tsamba U. Ivo vanowanzogadzirwa ematare mapipi uye aluminium, kana maprofayera. Mhando iyi yemarangi iri nyore kuungana. Kunyanya kana yakaiswa mabango kana mabhureki. Mukuwedzera, iwe unogona kuwana zvinomira concreting. Kusvikira bhasikoro kunzvimbo dzinomira zvinhu zviri nyore, asi zvakanetsa kuti bhasikoro rirambe rakamira, saka zvakakosha kutsamira bhasiketi pakamira kana kushandisa gumbo.
serial bhasikoro rack - yakamira, yakagadzirwa nezvinhu zvakaenzana neyezvitima, inowanikwa mune shanduro inove nenzvimbo dzinoverengeka dzakabatana. Munzvimbo dzemadhorobha, inotova nzvimbo gumi nemaviri kana kudaro mabhasikoro, asi pane zvivakwa zvakavanzika, dzimwe nguva kunyange rack yemabhasikoro maviri yakakwana. Row akamira ari nyore pakuvaka uye yakamanikana, saka iwe unogona kugadzira nzvimbo yeakawanda mabhureki padyo nemumwe. Ivo vanoiswa mavari neyemberi kana kumashure vhiri, saka zvinokanganisa kumanikidza bhasikoro.
Yemukati bhasiketi rack
Kune sarudzo yakasarudzika yemukati mabhasiketi emaraki emba yako kana furati. Mune ino kesi, sarudzo ndeiyi inotevera:
bhasikoro rakamira pasi pevhiri kumashure - yakapfava uye diki, yakapetwa chimiro, iyo mushure mekusavhurika inofanira kubatana nevhiri rehure nemakoko anokosha kana makomba.
hove mhando bike rack - sezvo zvisiri zvakaoma kufungidzira, bhasikoro raki nehuku rinokutendera kuti urembera. Mhinduro yacho inokosha mumakamuri madiki.
basa bike rack - iyi ndiyo yakatarwa mhando yeraki. Inobatsira nemhando dzese dzekugadzirisa panogadzikirwa bhasikoro. Ehe, hapana dambudziko nenyaya yekuti rakadai bhasiketi rack rinogona zvakare kushandiswa kuchengetedza michina mumba kana furati.
mudzidzisi - mune iyi kesi, haisi chigadzirwa chete chekuchengetedza iyo bhasikoro mune yakagadzikana. Panguva imwecheteyo, zvinokutendera kuti ushandise bhasikoro seicho chinowanzoitwa bhasikoro. Zvesekutenda kune chokwadi chekuti mudzidzisi akabata vhiri rekumashure munzvimbo. Uye zvakare, kune varairidzi-vanodzora vatyairi pamusika. Usati watenga, zvakakodzera kuti utarise kuti vhiri rakakura sei.
Chii chekutarisa kana uchitenga bhasiketi pimiti?
Kana uchisarudza bhasikoro rack, mutengo ndicho chimwe chezvinhu zvakakosha kunzwisisa kuti vazhinji. Kunyanya kukosha, zvakadaro, bhasikoro raki rinofanira kusangana nezvimwe maitiro. Kana iri imba imire, zvakanaka kana ichinge yadonha, nekuda kwayo inotora nzvimbo yakaderera. Izvo zvinyorwa zvekugadzira kwavo zvakakoshawo. Stainless simbi, aluminium kana kabhoni fiber racks zvakanaka. Rack dzakadaro dzinogona kutsungirira nemitoro yakakura. Mushure mezvose, mamwe maviri ma parameter anogona kunge akakosha - uremu uye kusimba system.
Saka hapana mubvunzo kuti kusarudzwa kwemabhasikoro kwakamira kwakakura. Sezvo munzvimbo yemadhorobha, zvakare inomira mafati uye dzimba dzinogona kuve yakakosha pakuchengetedza kwakachengeteka uye kwakagadzikana mabhasiketi. Nenzira iyi, zviri nyore kuwedzera hupenyu hwekushumirwa bhasiketi pachayo, pamwe nekuchengetedza fenicha iri pedyo nezvimwe zvinhu.
5 / 5 ( 37 mavhoti )
mirira mabhureki manamirira mabhureki manamirira mabhureki manamira mabhureki maviriBike rackcastorama bike rackbhasikoro rack mutengokumba bhasikoro rackbhasiketi rack yegarajimota bike rackhovha bhasikoro rackbhasiketi rack zviyero